Kuleli khulu leminyaka, by Isifaniso nge zethusi noma yensimbi ubudala, singasho kugcwale ubizwe ekhulwini materials oluyinhlanganisela. Ukuvela leli gama libhekisela phakathi nekhulu leminyaka elidlule, kodwa kakhulu umqondo awumusha - ukusetshenziswa inhlanganisela ngezinto ezahlukene ezisetshenziswa ekwakheni amakhaya abakhi wamandulo iBhabhiloni neRoma, amakhosi emaphethelweni eGrisi bese eMoscow lasendulo abaklami. Ngaphezu kwalokho, amasampula materials esiyinhlanganisela e ezihlukahlukene Imvelo uqobo lwayo - ithambo, ukhuni, amagobolondo kwezilwane, njll izinto Composite unezici izinga okuhle kanye ukubukeka ekhangayo.
Lezi izinto yakhiwa izingxenye eziningana: isisekelo plastic, othiwa matrix kanye fillers okukuvumela ukunikeza nenye kokuqala izakhiwo okuqala ekuqaleni ethize kuso. Isici zezinto esiyinhlanganisela kuba phambi imingcele ephakathi yezingxenye, ababiziweyo izigaba.
Ukukhiqizwa lezi izakhi ihlose lapho kudalwa imikhiqizo emisha ukuthi kukhona eliphezulu kakhulu ludingeka ekuthuthukisweni yesayensi yanamuhla futhi ukukhiqiza. Ukuze kuzuzwe yi abayifisayo besebenzisa lezo ushintsho ratio matrix kanye fillers, amanxusa ekhethekile ngenkuthalo esetshenziswa. Okubaluleke ngendlela efanayo enkulu ekwakhekeni zezinhlanganisela unelungiselelo lokunika izakhi indaba, ukuze abo maqondana nomunye futhi siye ohlangothini ehlosiwe lomthwalo umthelela. Ayanda amandla esiyinhlanganisela, oda eliphakeme oyiyo.
Namuhla, leli gama libhekisela zonke izinto esiyinhlanganisela ezihlukahlukene imikhiqizo eyenziwe umuntu, uma nje inqubo yabo ukukhiqizwa ihlangabezana izimiso eziyisisekelo ukudala inhlanganisela. A Ukwenyuka okukhulu isithakazelo ukuthuthukiswa kanye ukukhiqizwa izinto ezintsha kunomthelela ukungafani imiklamo bendabuko nezidingo ubunjiniyela umkhuba yesimanje.
Yini aqukethe inhlanganisela
Njengoba matrix e ekwakhekeni yabo evame ukusetshenziswa: usimende, izinsimbi, polymers futhi izitsha zobumba. Fillers ngaleyo ndlela kungaba izinto zemvelo noma yokufakelwa kokuba fiber, ishidi, a abahlakazekile bengaba, usayizi amafomu ezinkulu (muva lwakha microparticulated futhi nanoparticles ziye zasetshenziswa).
Multicomponent esiyinhlanganisela izinto zihlukaniswe: hybrid, kufaka phakathi ngezithako zawo fillers ezahlukene kanye polimatrichnye ngokuhlanganisa kwesinye impahla matrices eziningana.
Field kwesicelo materials esiyinhlanganisela
Ngoba, ukudala inhlanganisela, nika ngamabomu them bo pahla ezahlukene, kanye kwenkululeko isicelo sabo okuthathwa njengokumele kube olunzulu. Ngenxa isakhiwo ayo kanye nokusungulwa, inhlanganisela kungaba izakhiwo umsakazo-iyavuleka noma radiotransparent, kalula sibhekane ngokuphumelelayo ukuvikelwa ezishisayo iziteshi isikhala. izinto Composite ezisetshenziswa njengeziwusizo okuhlala nokunokwethenjelwa zokwakha kanye kuphela amahle zokuhlobisa. Kunzima overestimate kungenzeka ukuthuthukiswa nokwenziwa ngcono ukukhiqiza nobuchwepheshe, okuyinto eyenza ukusetshenziswa zezinhlanganisela e electronics, imithi, umkhakha, ezemidlalo, art.
Manje wazi okuningi ngalokho kuyinto ukukhiqizwa izinto esiyinhlanganisela!
Cutting machine baseBulgaria ngumnikazi izandla: imidwebo, imidwebo kanye nemiyalelo
Inkungu Generator: ezisebenza izimiso, isicelo
Reed inkinobho: isimiso wokusebenza futhi idivayisi
Isihlungi umfutholuketshezi: ukubuyekezwa, izincazelo, izinhlobo, osayizi, kanye nokubuyekeza
Cargo izitilobho nezinhlobonhlobo zazo
Semiconductor Lasers: imihlobo idivayisi, isimiso yokusebenza, ukusetshenziswa
Kanjani ukuze uthole isiphetho ezinhle Metro Last Light: incazelo Game kanye nezincomo
Upende okuhlobisa for izindonga: izinhlobo nezindlela kwesicelo
Indlela ukudweba isibani kulula futhi okusheshayo
Soy inyama: zokupheka
Sunny Adler, guest house "Valentine": incazelo, ukubuyekezwa
I indophi phezu UAZ izandla siqu